Khin Ma Ma Myo's Blog: September 2007
People’s Revolution: Suggestions for current situations in Burma
I simply believe that Burmese Democratic Movement isarevolution. Not justacampaign. People wage revolution asameans of regaining their identity either from foreign domination or from repressive regimes. As it isarevolution, we need to use all battlefronts of People’s revolution; namely cultural-spiritual, political, social economic, military and international battlefronts. If we emphasize only one battlefront, time delays can occur.
My main concern in this article is the advanced form of people’s war during the latter half of 20th century and 21st century, i.e. the revolutionary model.
According to this model, there are certain conditions that must be existed or created to getacertain degree of success. These include
People support and
Development of the philosophy of co-coordinated actions in all battlefronts.
This exists when considerable changes have taken place in the economic base of society; when there isadecline in the effectiveness of the administration; when extraordinary events occur which show the weaknesses in the ability of the institutions ofaState and so on.
The current situations in Burma highlight that such conditions exist. For example; economic deterioration, inflation, lack of effective administration, corruption, decline in middle classes, decay of state control in crime figures, recent fuel price hikes and using state terrorism against the opposition groups, etc.
If these conditions exist,arevolution situation comes into play.
It develops when there are
Fear of deprivation and rising expectations such as development of social organizations, sufficient number of people who believe that their natural growth was confined by the government system and growing numbers of people who convince that something needed to do to change the system.
Failure of the government system such as ineffectiveness, corruption and lack of government contacts with low levels of the society.
Breakdown of control and administrative agencies such as polarization between agencies (police, special branches, military forces), collaboration by members of these agencies with emerging revolutionary forces
Breakdown of essential services such as failure of communications and means of supply of essential commodities (food, fuel, electricity, medical aid)
There are some other facts but I only mentioned the ones that developed the current revolutionary situation in Burma. Most of the People in Burma understand that they were being deprived of universal rights asahuman and their potential growth was limited due to the military regime. So they realize that the system must be changed and the regime should be kicked out. However, we must be very careful to put their expectations to put forward without too much dependency on the outside forces.
Furthermore, there isafailure in the system and the government has lack of contacts with the low levels of the society. We need to take advantage to this failure to organizeasocial guerilla force.
There is alsoapossible breakdown in the control and administrative agencies. To improve the breakdown, we have to open the way out of their main agencies. Recently, the high official of Shan Army announcedawelcome message to the soldiers who want to collaborate with the revolutionary people side. This is an important political initiative in this situation. As they are members of the state agencies, they may take weapons and ammunitions. If they collaborate with the people in urban areas, we need to hide these weapons for further possible usages. So we have to prepare the secret places in advance.
For essential services, some preparatory talks should start between the revolutionary forces and the business people who are willing to help. We have to understand the nature of these people. In general, they want to stay behind the curtain and help asalow profile.
While developing the above revolutionary situations, any regimes may be functional to remove the leaders. If they can succeed by using genocide or massive removal, revolution can be delayed foradecade,ageneration or sometimes evenacentury. So it is important that there must beacontinuous hands-on training and skills development as well as finding the potential leaders.
Revolutionary problems demand the qualities of the leader depending on the nature of the war. Where there isapositional-linear war, it requires technical and technological skills. For mobile war, it requires mental and moral characteristics. For people’s war, it requires all these plus intellectual, psychological and social skills. Some are built-in skills. But some skills can be trained. Altering the equation of political power is an essential task now. On our revolutionary side, we have social, cultural and psychological factors now. On the regime side, they have economic, political and military factors. How will we equate?
We have to equate by winning hearts and minds, by influencing the behavior of the people and alienating them from the government. The people in Civil Services should be mainly organized to do this. The regime may have some control mechanisms to prevent them to join the revolutionary forces. We have to encourage them to tackle these mechanisms without fear by all means. As they may have more potential losses than ordinary people, they do not join at the early stages of the revolution. We have to use some tactics to win their hearts and minds first. One important thing is not to frustrate if they do not co-operate at the first stage. Some revolutionary forces sometimes makeamistake to challenge them when they do not alien from the government in the callings of Civil Services Strike or whatever. Repetitions can be worth in some events. We have to call and call again.
Let’s move on to the organizational requirements.
A grass-root infrastructure must be organized in all segments of society. It is the major requirement. If there isalack of this infrastructure, the government can control the situation easily withinashort period. It should have the components of
· revolutionary organizers (cadres) who build the organization in different areas
· cell system of arms-group fighters
· vertical system of committees for political control
· horizontal system of committees and organizations covering all walks of life and
· circuit organizations for intelligence and escape routes
The next requirement is the high-level intelligence organization in all organs of society. As Sun Tzu, Donald and Cookridge mentioned, intelligence (social intelligence, economic intelligence, political intelligence, military intelligence, etc.) is the common denominator. It is important that there must beadirect interlocked at all organization levels to make immediate responses. Centralization is not good because there isatime lag between event and response. If there arealot of political organizations, trying to reduce the centralized system and letting the local organizations to form alliances by themselves to do local activities will be the best option. Decentralization is very important for mobile forces.
The other requirement isahigh-grade propaganda system for the acceleration of events. This is the life of the political programme so that media should give the accurate information and clear objectives of the revolution. The public sometimes make decisions to collaborate with the revolutionary forces or stay away in accordance with the media. Media is vital in gaining initiative as well as slowing down the momentum of the revolution.
Moreover, there must beapoliticized military force on the side of the revolution and at least some military actions at the peak moments of the revolution. The main aim is not for military victory. However, it is important for motives.
The next requirement is the development of international connections. For this, we have to categorize which country or organization will be helpful in what segments. We have to ask various forms of help from the right connection at the right time. Otherwise, time investment to build these connections can become zero rates of returns.
Mao once mentioned as ‘Weapons are an important factor in war, but not the essential one, it is the power and morale of man that finally counts’. Even in wars, the support of the people isacrucial one.
There are some requirements in this condition such as the necessity of social analysis, the emergence of living political program and the commitment and dedication of the leaders and organizers to the cultural, social and economic needs of the people.
For our revolution, we have achieved people support in some degrees. To getafull support and more collaboration, we have to initiate the political program that contains historic facts that identify the real enemy, explanations that cause the social and economic inequalities, spiritual hope of final victory, international appeal and mass communication means of grass-root levels through radio, press, leaflets, demonstrations, music and speakers. These must be carefully designed that gives our people to have the clear vision of the revolution.
I would like to emphasize in this point that international appeal is only useful for telling people that they are being watched and helped by the international community in most circumstances. So we should be careful not to give impossible hopes and expectations because if it does not happen, the momentum of the revolution can be slow down. International battlefront is only one part of the five main battlefronts of People’s Revolution we have to wage. We should not totally focus on one front as it can reduce the co-ordination efforts between all battlefronts.
Battlefronts of Revolution
Inacell development process, the central core of the growth isanucleus and the cytoplasm region that contains segments is attracted around the core. Inarevolutionary model, the nucleus is the political battlefront and the outside segments include cultural-spiritual, social- economic, military and international battlefront.
Among these battlefronts, cultural-spiritual one is the foundation of the revolution. It aims for the man’s soul or his subconscious mind. Apparently, social-economic one aims for man’s heart or his conscious mind. Through the political core, cultural-spiritual needs are shown in moral values and partially translated into social and economic terms to direct the political struggle. The other battlefront, military one provides the organizational form and its actions are in support of other fronts although it cannot gainamilitary victory. The final battlefront, international one is concerned with applying external pressures on the established government.
There must beahigh level of coordinated actions in all battlefronts. I sincerely think that we have weaknesses in some battlefronts andalot of unnecessary actions in some in terms of manpower and financial expenditures. If we cannot fulfill this gap, it can lead to some delays forafinal victory.
In conclusion, I would like to make some suggestions to
(i) take the geo-political advantages such as spreading the demonstrations to other places and other cities
(ii) use the intelligence and public help to identify the places where there arealot of military troops and change the directions of the marching routes
(iii) avoid the well-known central downtown like Sule and Shwedagon pagodas, Hle Tan, Pansodan
(iv) start demonstrations near to the markets
(v) form the circuit organizations for escape routes (military will use killing fields asabattle so that please try to avoid the route that can be trapped likeakilling field)
(vi) explain the people how to response calmly during confrontations (If people do not know, it can be more injured)
(vii) avoid putting someone too obvious among the people (If the troops can identify the leader, there are more risks of snipers and target shoots. The speakers and the flags must be hold interchangeably)
(viii) use the strategy of surprise movements like 'hit and run' in guerilla warfares
(viii) avoid wearing any kind of uniforms
(ix) avoid using the video camcorders for media because it can be easily targeted. (Please use the small video cameras)
(x) try to organizeahorizontal committee including all walks of life that leads toacoalition interim government inside Burma as soon as possible. All internal and external democratic forces must support when it appeared. This is the most important issue as it can take the next political step for this situation. However, please do not use the individual names for media purposes and use the collective name in all circumstances.
All these are my sincere suggestions for our democratic revolution. At last, People's revolution always wins.
(Democratic Federation of Burma)
Elliot-Bateman, E.; Ellis, J. and Bowden, T (1974) Revolt to revolution: Studies in the 19th and 20th century European Experience, Manchester University Press, Rowan and Littlefield
Baron A.H. de Jomini,(1971) The Art of War, Reprinted, Westport, Conn
Lawrence, T. (1935) Seven Pillars of Wisdom, Jonathan, Cape
General Vo Nguyen Giap, People’s War, People’s Army, Hanoi, 1961
Labels: English articles, နိုင်ငံရေးရာ
သြဂုတ်လမျက်ရည်၊ စက်တင်ဘာသွေးစက်မှသည် အောက်တိုဘာအောင်ပွဲဆီသို့
လမ်းမထက်တွင် သွေးတွေ ထပ်စွန်းခဲ့ပြန်လေပြီ။ အကျဉ်းစခန်းများတွင် လူတွေပြည့်နှက်နေခဲ့လေပြီ။ ရဟန်းရှင်လူ၊ ပြည်သူအများ၏ သွေး၊ချွေး၊ မျက်ရည်စက်များက စစ်အာဏာရှင် စိန်ခေါ်ပွဲကို တကမ္ဘာလုံးသို့ ဖြန့်ချပြလိုက်သည်။ သေနတ်များ၊ ဒိုင်းများ၊ တုတ်၊ ဓားများကိုင်ဆောင်ထားသော လူသတ်သမားများရှေ့မှ ရဲဝံ့သော ဘုရားသားတော်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ ပြည်သူများ၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကို တကမ္ဘာလုံးမှ အံ့သြဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ယုတ်မာသော စစ်ခွေးများ၏ ဇာတိရုပ်ကို တကမ္ဘာလုံးမှ ရွံ့ရှာစက်ဆုပ်ခဲ့ကြသည်။
သြဂုတ်လမှ အစပြုခဲ့သည်။ လောင်စာဆီကျဆင်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်သော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူများကို လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ မတရားသော စစ်အာဏာရှင်တို့၏ လူစိတ်ကင်းမဲ့နေသော လုပ်ရပ်များအတွက် လူအများ မျက်ရည်ကျခဲ့ရသည်။ ဘုရားသားတော်များက ဒုက္ခမီးလောင်နေသော မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် မေတ္တာပို့ဆုတောင်း လှည့်လည်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကိုပင် မနာလိုမရှုဆိမ့်နိုင်သော ဖက်ဆစ်များက လက်အုပ်ချီမိုးရမည့် သံဃာတော်အား ဖိနပ်နှင့် ကန်ကျောက်ကာ ဓာတ်တိုင်တွင် ကြိုးချည်ရိုက်ခြင်းဖြင့် တုန့်ပြန်လိုက်ကြသည်။
သာသနာတော်ကို ဤမျှအထိ စော်ကားမိုက်ရိုင်းခြင်းအပေါ် အချိန် (၁၀)ရက်ပေးကာ တောင်းပန်စေခဲ့သော်လည်း မိစ္ဆာဒိဌိများက အမှန်တရားကို မမြင်ခဲ့ကြ။ အ၀ီစိတိုင်အောင် မိုက်တွင်းနက်နေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ မိစ္ဆာများအား ဘုရားရှင်ထားခဲ့သည့် ဒေသနာတော်အတိုင်း ကံဆောင်သပိတ် မှောက်ခဲ့ကြသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတွင် လူပီသသူတိုင်းသည် ကံဆောင်သပိတ်ကို နားလည်ကာ သာသနာတော်အား စော်ကားခဲ့မှုများအတွက် ၀န်ချတောင်းပန်ကြစမြဲ။ သို့ပေမယ့် ဖက်ဆစ်စစ်ခွေးများကတော့ နားမလည်ကြပါ။
နားမလည်ရုံမက ထပ်မံ၍ပင် စော်ကားခဲ့ကြလေပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ပြည်မြန်မာ၏ မြို့တော်ရန်ကုန်ဆီမှ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင်ပင် ၀တ်ပြုနေသည့် ဘုရားသားတော်၏ ခေါင်းကို ရိုက်ခွဲကာ သာသနာဖျက်မင်းဆိုးမင်းညစ်များ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူလိုက်ကြသည်။ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ သေနတ်သံများ၊ လူသတ်တုတ်များအကြားတွင် ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများ၏ သွေးစက်တွေ မြေခခဲ့ရသည်။ သွေးပင်လယ် ဝေခဲ့ရသည်။
ဖက်ဆစ်စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူများအပေါ်တွင် သမိုင်းကြွေးတင်နေကြလေပြီ။ လမ်းမထက်သို့ ကျခဲ့ရသော သွေးစက်များသည် ဖက်ဆစ်လက်ပါးစေ စွမ်းအားရှင်များ မည်သို့ပင် ရေနှင့်ဆေးကြောကာ ဖျောက်ဖျက်နေစေကာမူ၊ သံဃာတော်များအား ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးစဉ်က ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်ကြီးထဲတွင် စွန်းပေခဲ့ရသော သံဃာ့သွေးစက်များအား မည်မျှပင် သဲလွန်စဖျောက်ဖျက်နေစေကာမူ၊ ပျောက်ပျက်ကာ သွားမည် မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်ကြီးတွင် သွေးမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်လာပေတော့မည်။
အောက်တိုဘာလ အထွေထွေသပိတ်ကြီးအတွက် လူအများ ညီညွတ်နေကြလေပြီ။ အောက်တိုဘာ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတွင် ကျရာနေရာမှ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါစို့ဟု ရေးသားလိုက်ရပေသည်။
ပြည်တွင်းသတင်းအနှစ်ချုပ် (၂၈.၀၉.၂၀၀၇) (နစ်နေမန်းစီဘော့စ်မှ ယူပါသည်)
နံနက် (၄း၀၀)- ရွေတိဂုံဘုရားမှာ ဘုန်းကြီးခေါင်းကို ရီိက်တဲ့သူနာမည်က ရန်ကင်းက အောင်ထူးတဲ့၊ ကြံ့ဖွံ့ အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
နံနက် (၄း၀၃)-မနေ့ ည (၉း၄၅) နာရီတွင် စစ်ကား(၇)စီးနှင့် နောက်က အရာရှိကားတစ်စီး အင်းစိန်းလမ်းမှပေါ်မှ အင်းစိန်ဘက်သို့ မောင်းသွား။ ကားပေါ်တွင် လူသေများ၊ ဒဏ်ရာရသူများ များစွာပါသွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
နံနက် (၅း၄၇)နိုင်ငံတော်သံဃာနာယကအဖွဲနဲ့ အတော့်ကိုနီးစပ်တဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးပြောကြားချက်အရ နိုင်ငံတော်သံဃာနာယကဆရာတော်တွေထဲက ဆရာတော်ကြီး အပါး (၃၀) ဟာ အခုလို ရဟန်းဘုန်းကြီးတွေကို ပြစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တာကို လုံးဝအဘောမတူဘဲ အတော့်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတယ်လို့အသိပေးလာပါတယ်။
: ဒီဆရာတော်ကဘဲ မိန့် ကြားတာက ပြည်သူတွေအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်လည်အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရှောင်ပြီး လူထုချီတက်ပွဲတွေကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အောင်ပွဲရဖို့ အတွက်ကို ဒီလိုလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ပြန်လည်အကြမ်းဖက်ရင် နအဖဖန်တီးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲအနေအထားကနေ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ရင်းနှီးပေးဆပ်နေရတာတွေ အလဟသဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ အခုလို ပိုမို ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဘုန်းဘုန်းတွေကို ပြည်သူလူထုက အတတ်နိုင်ဆုံး ဒီထက်ပိုပြီး ကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ နဲ့ပြည်သူလူထုတွေ ထပ်မံ အင်အားတိုးပါဝင်လာကြဖို့ ကိုလည်း အထူးမေတ္တာရပ်ခံသွားပါတယ်
နံနက် (၈း၂၀)- ဒီနေ့မနက်ကျိုက်ဝိုင်း ပစ္စိမာရုံ ကျောင်းတိုက်က သံဃာတော်တွေကို နယ်ပြန်ခိုင်းတယ်ကြားရပါတယ်.
နံနက် (၈း၅၆)-ယမန်နေ့ည က တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်အမှတ် ၂.စီး အပါအ၀င် ကားစုစုပေါင်း ၃၇ စီးဖြင့် လူကြီးလူငယ်ယောက်ျား ၃.၄. စသည့်ရပ်ကွက်များတွင် စစ်ကား ၄ စီး အပါအ၀င် ကားစုစုပေါင်း ၃၇ စီးဖြင့် လူကြီးလူငယ်ယောက်ျား အားလုံးကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေရော ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ လူဦးရေဘယ်နှယောက် ပါသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျမသိသေးပါ။
ယမန်နေ့ကစစ်တတ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်ရန်ကင်းတိုက်မှ မိုးကောင်းဆရာတော် ပြန်လွန်တော်မူရှာသည်.ထှိကြောင့်ဒီနေ့လဲပိုမိုပြင်းထန်မဲ့ဆန္ဒပြပွဲများလုပ်ရန်အစီအမံများရှိသည်ဟုကြားသိရသည်။
နံနက် (၉း၀၂)- ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းတစ်ရပ်ကဖြစ်ပါသည်။ သံဃာ့မဟာနာယကဆရာတော်ကြီးတွေကို အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ခင်ဗျား။ ဆရာတော်ကြီးတွေက သံဃာတော်ကြီးတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြီး မနှိမ်နင်းဖို့အတွက် နအဖ ( စစ်ဘီလူး ) အဖွဲ့လူကြီးတွေဆီကို တောင်ဆိုစာတင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီစာရြ့ပီးတော့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို အစည်းအဝေးခေါ် ပြီးဘီလူးတွေကပဲပြောရတယ်....ဆရာတော်တွေဘာမှကိုမပြောရဘူး.နောက်ဆုံးတော.သူတို.ပါသာသူတို့ပစ်မိန့်ဆိုပြီးအစည်းဝေးပွဲကိုရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်....ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ အရမ်းဝမ်နဲကြေကွဲပြီးမျက်ရေတွေတောင်ကျရတယ် ဆရာတော်ကြီးတွေမှာ အသက်ကြီးမှစိတ်ဆင်းရဲနေကြရရှာတာ ...အဒီသတင်းလေးကိုပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပေးပါ
နံနက် (၉း၀၃)-မနေ့က ပစ်ခတ်ခိုင်းတဲ့စစ်သားတွေက စစ်သားအစစ်တွေမဟုတ်ပဲ ထောင်သားတွေကို ထောင်သားတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး ဆေးတိုက် ပစ်ခိုင်းတာလို့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။
နံနက် (၉း၀၄)- ညက ဒေါပုံမြို့နယ်ရွာလည်းကျောင်း၊ သံဃာတော်အပါး ၃၀၀ ခန့်ကို ကြမ်းတမ်းစွာဆဲဆိုရိုက်နှက်ကာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။
နံနက် (၉း၀၈)-တစ်ချိူ့စစ်တပ်ကမိတ္ထီလာကခေါ်လာတာဖြစ်ပြီ့း ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ချိူ့မှာကွန်မြူနစ်တွေ သိမ်းထားလို့ပြန်သိမ်းရမယ်လို့အထက်ကအရာရှိတွေက ညာ ပြီးလုပ်ခိုင်းတယ်လိုဆိုကြပါတယ်။့
နံနက် (၉း၁၈)-Good news! No.33 Army force refuce to shoot the people officially.Government ordered to No.33 Army for move out from Mandalay but they are not following the order.We need to pray for our people and real Myanmar Soldiers.
နံနက် (၉း၂၉)- ဓါတ်ပုံသမား ၊ မီဒီယာသမာဒများ အထူးသတိထားကြပါ .... ဓါတ်ပုံ ရိုက်ထားရာ အရပ် နဲ့ နေထိုင်ရာ အခန်းများ ကို စစ်အစိုးရမှ ခြေရာခံလိုက်နေပါတယ် ... ယမာန်နေ့က ထရိတ်ဒါးနဲ့ ဆာကူရာမှာ စစ်သားများ ကွန်ပျူတာအားလုံးကို စစ်ဆေးသွား ကြပါတယ် ။ သတိထားကြပါ ....
နံနက် (၁၀း၁၁)- ယခု ၉နာရီ ၁၅မိနစ် မှာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ငွေကြာရံကျောင်းတိုက် အနီး ဗဟိုဈေးကားမှတ်တိုင်တွင် စစ်ကား ၂စီး လုံထိန်းလို့ အမည်တက်ထားတဲ့ နအဖ ခွေးအစိုးရရဲ့ နောက်လိုက်များ အပြည့်တင်ဆောင်လာသည့် ဟိုင်းလပ်ကား တစ် စီး ဒိုင်နာကား ၃စီး အရန်သင့်ရောက် နေပါပြီ...။
နံနက် (၁၀း၃၉)-ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် အင်ဘရာဟင် ဂန်ဘာရာကို နအဖက မနက်ဖြန်ကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်လာတာ မြန်မာပြည်သုလူထုအတွက် အမှန်တကယ် ကူညီနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ နအဖက လေပြေလေးသွေးလိုက်လို့ပြန်သွားရင် နအဖက ပြည်သူတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်သတ်လို့ ရမယ့် အခြေအနေပိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပြည်သူတွေဘက်ကနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ တိုက်ရိုက်တွေ့ ဆုံပြောပြနိုင်ဖို့ လိုသလို၊ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုတွေကို ပိုမိုအရှိန်အဟုန်ပိုမိုမြှင့်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ နအဖက UN ကိုယ်စားလှယ်ကို လာခွင့်ပေးပြီး ဆက်ညာမှာပါ။ UN ကိုယ်စားလှယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူတွေ အကုန်လုံး လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ပြစ်ခတ်မှုတွေ ရိုက်နှက်မှုတွေ မဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ပြည်သူတွေအတွက် ဒီအခွင့်အရေးကို အဆုံးရှုံး မခံပါနဲ့ ။ လူထုဆန္ဒပြဖို့ အားလုံးထွက်ကြပါ ပါဝင်ကြပါလို့ အထူးတိုက်တွန်းပါတယ်။ နီးစပ်ရာအမြန်ပြောကြပါ။
နံနက် (၁၁း၀၄)-နအဖက မြန်မာပြည်မှာ အခု ဖုန်းလိုင်းအများအပြား ဖြတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကို ပြည်သူက ဆက်သွယ်လို့ မရအောင် ဖြတ်ထားလိုက်တာလား၊ အကြမ်းဖက်သတင်းတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လားဆိုတာ...
နံနက် (၁၁း၃၂)-မြောက်ဥကလာဘုန်းကြီးလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ပျော်ဘွယ်ဓမသိဂီ င်္ကျောင်းကိုအခုစစ်တပ်က၀ိုင်းနေပြီ
နံနက် (၁၁း၄၄)-၇န်ကုန်မှာ နှစ်နေရာက စထွက်ဖို့လုပ်နေတယ်။ တကြောင်းက အင်းစိန်ကနေ၊ အရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဦးစီး ပြီး ထွက်မယ်။
နံနက် (၁၁း၄၅)-messageမနျွှလေးမှာ ၁ နာရီစမယ်။ညက မန္တလေးမှာ ဖမ်းတာ ဘုန်းဘုန်း ၄၀ ကျော်ပါသွားတယ်။
နံနက် (၁၁း၅၀)-trader နား မှာ ပြည်သူ၁၀၀၀၀ ကျော်စုမိနေ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်
နံနက် (၁၁း၅၅)-ခိုင်လုံသောသတင်းအရ - နအဖမှ တပ်မ (၃၃) အား မန္တလေးတွင် ပြည်သူများအား ပြစ်ခိုင်းရာ ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ထွန်းအောင်မှ အမိန့် အား ထပ်မံငြင်းဆန်ကြောင်း သီရှိရပါသည်။ စစ်တပ်အတွင်းတွင် ပြည်သူနှင့် ပူးပေါင်းလာမည့့် ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားများ ရှိလာနေပါပြီ။
နေ့ (၁၂း၀၀)-မြောက်ဥက္ကလာမှာ ပစ်နေပြီဟု သတင်းရသည်
နံနက် (၁၂း၁၀)-ခိုင်လုံသောသတင်း - - တပ်မ ၂၂ (၈၈၈၈ တုန်းကသုံးသောတပ်) ကို ရန်ကုန်သို့ ခေါ်ယူလိုက်ပြီ
နေ့ (၁၂း၃၄)-မြောက်ဥက္ကလာမှာ ပြင်းထန်စွာစတင်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ် ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးကြပါ
နေ့ (၁၂း၃၉)-မြောက်ဥက္ကလာပ ဘုန်းကြီးလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ ပျော်ဘွယ်ဓမသိဂီ င်္ကျောင်းကို စောစောက စစ်တပ်က၀ိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။
နေ့ (၁၂း၄၉)-ခိုင်လုံသော သတင်း - တပ်မ(၃၃) မလိုက်နာလို့ (၉၉)ကို လေယာဉ်နဲ့ ပို့ လိုက်တာ
နေ့ (၁၂း၅၅)-ရန်ကုန် သိမ်ကြီးဈေးတွင် ပြည်သူ ငါးသောင်းခန့် ရောက်ရှိနေ
နေ့လည် (၁၂း၅၆)- မြောက်ဥက္ကလာမှာ တပ်၆၆က လူနဲ့ပေါင်းပြီး၊ တပ်အချင်းချင်းပစ်နေပြီ။
နေ့လည် (၁၃း၀၁)- မိတ္ထီလာ လေတပ်မှ လေယာဉ်များ ပျံတက်သွားသည်။ တပ်မ ၃၃ နှင့် တပ် ၉၉ အတွင်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
နေ့လည် (၁၃း၀၆)- အင်းစိန်ရဲ့ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းအရ GTI ကျောင်းထဲမှာသံဃာတွေအများကြီးဖမ်းထားပါတယ်
နေ့လည် (၁၃း၀၉)- ယရက ရုံးတွေဆို ပိတ်ထားတယ်။ မဖွင့်တော့ဘူး။ ညကနေ စတာပေါ့ဗျာ။ ရှောင်တဲ့ကောင်တွေ ရှောင်ကုန်ပြီ။ မရက အဆင့်ထိကို ဖြစ်နေပြီ။ ခရိုင်အဆင့် ထိကို ရောက်နေပြီ။ အောက်ခြေတွေ ပြိုနေပြီ။
နေ့လည် (၁၃း၁၃)- စံပြဈေးဘက်မှာ လူ (၁၀၀၀)ကျော်ရောက်နေတယ်။
နေ့လည် (၁၃း၄၅)- According to the yangon contacts, Air Bagan Advertisement signboards were destroyed in downtown and didn’t know who did that. They didn’t hear of army shooting fire guns nor demonstrations in downtown until now. They confirmed that Internet connections are down because MPT said they need to do service maintenance. There were army trucks in DhammaZedi Road too.
နေ့လည် (၁၄း၀၇)- : မြန်မာပြည်တွင် ဖုန်းလိုင်းများ ဖြတ်တောက်ခံရပြီး ၊ တချို့ကိုလည်း ခိုးနားထောင်ကြောင်း ကြားသိရသည် ။
နေ့လည် (၁၄း၃၂)- : မြောက်ဥက္ကာလာပမှ စစ်တပ်သတင်းအား ပိုမိုအတည်ပြုနိုင်ရန် ထပ်မံစုံစမ်းလျက်ရှိပါတယ်။
နေ့လည် (၁၄း၃၅)- : အခုအနော်ရထာလမ်းမှာစစ်သားနဲ့လူထုထိတ်တိုက်ချနေကြတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းကလဲပစ်သံကြားတယ်။ စံပြဘုန်းကြီးလမ်းမှာအခုပစ်နေပြန်ပြီ။
နေ့လည် (၁၄း၃၆)- : မြောက်ဥက္ကာပ အထက်တန်းကျောင်းတကျောင်းတွင် ချီတက်လမ်းလျှောက်နိုင်ရန် တန်းစီပေးနေသော ဆရာဆရာမများအား စစ်တပ်မှ ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်နေတယ်
နေ့လည် (၁၄း၄၃)- မြောက်ဥက္ကာပ အထက်တန်းကျောင်းတကျောင်းတွင် ချီတက်လမ်းလျှောက်နိုင်ရန် တန်းစီပေးနေသော ဆရာဆရာမများအား စစ်တပ်မှ ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်နေတယ်
နေ့လည် (၁၄း၄၄)- ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး ဖုန်းကြီးသတ်တဲ့ မိစ္ဆာတွေ မိုးကြိုးပစ်လို့ သေပါစေ မိစ္ဆာအစိုးရ အလိုမရှိ လို့ ဒီကနေ့ဆန္ဒပြသူတွေ ကြွေးကြော်ကြတယ်
နေ့လည် (၁၄း၄၉)- ပန်းဆိုးတန်းမှာ စစ်ခွေးတွေ စပစ်နေပါပြီ
နေ့လည် (၁၄း၅၂)- ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ယိုးဒယားဘုန်းကြီးတွေက ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။ သြစတြေလျမှလည်း မြန်မာလူမျိုးတွေ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
နေ့လည် (၁၄း၅၉)- :ြ်မန်မာနိူင်ငံဆိုင်ရာ သြစတေးလျနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက ၂၇ ရက်နေ့ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်လို့သေဆုံးသွားသူတွေဟာ နအဖပြောတဲ့ ၉ယောက်တဲ့အများကြီးပိုများနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်
နေ့လည် (၁၅း၀၁)- အခုပြည်တွင်းမှာ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ ဖြတ်တောက်ထားလို့သတင်းများခက်ခဲစွာ တင်နေရပါတယ်။ ရအောင်ကြိုးစားပြီး ဆက်တင်ပေးနေပါမယ်။
နေ့လည် (၁၅း၁၀)- : ပြည်တွင်းမှာ အင်တာနက်များ ပြန်ရပြီ။ သတိတော့ထားဖို့ လိုပါသည်။ ကြားဖြတ် မှတ်နေမည်ကို သတိထားပြီး လုံခြုံရာများနဲ့သုံးကြဖို့ ပါ။
နေ့လည် (၁၅း၁၁)- ရွှေတိဂုံအရှေ့ ဘက်ကလူထုကြီးတွေစပြီးချီတက်လာနေပြီလို့ ကြားရပါတယ်။ လူထုစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းက ဘုန်းကြီးလမ်းကနေ အခုသူနာပြုတက္ကသိုလ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ကျောင်းသားငယ်တွေ ဦးဆောင်နေပါတယ်။
နေ့လည် (၁၅း၁၅)- : ကြးဖြတ်သတင်း - နအဖ၀န်ကြီးချုပ် စိုးဝင်းသေသွားပြီလို့San Francisco Chronicle သတင်းစာထဲမှာ ပါတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ ဒီသတင်းတော့ San Francisco က သူတွေဘဲ သတင်းအတည်ပြုဖို့ ပါ။
နေ့လည်(၁၅း၁၈)- လူထုစစ်ကြောင်းတွေကများလာပါတယ်။ နေရာအနှံ့အပြားကိုခွဲသွားနေကြပါတယ်။ တပ်ကတော့အခုလောလောဆယ်ထိပ်တိုက်မတွေ့ သေး။ ရှောင်နေကြ။ လမ်းတလျောက်လုံးဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့ စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုသတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူးလို့ အော်နေကြပါတယ်။
နေ့လည် (၁၅း၂၁)- ရန်ကုန်အတွင်း အချို့ ရပ်ကွက်များမှာ စစ်တပ်များမ၀င်နိုင်အောင် ပိတ်ဆို့နေပါတယ် လူငယ်များဦးဆောင်ပြီး စုဖွဲ့မှုများ ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်နေကြပါပြီ
နေ့လည် (၁၅း၂၉)- မန္တလေး ဘုရားကြီး အရှေ့ဖက်မုဒ်မှာ လူထုနဲ့ စစ်တပ် ထိပ်တိုက်တွေ့နေပါတယ် စစ်တပ်က စည်း၃စည်း တားထားပါတယ်
နေ့လည် (၁၅း၅၃)- တာမွေတွင်ကျောင်းသားငယ်များ(၃၀၀)ခန့်ချီတက်နေပါတယ်။
နေ့လည် (၁၅း၅၆)- မြောက်ဥက္ကလာမှာ နအဖဘက်ကတပ်တွေ ပြန်ဆုတ်သွားပြီလို့ သတင်းရပါတယ်
နေ့လည် (၁၅း၅၇)- : မြန်မာပြည်တွင် လေကြောင်းလိုင်းက လောလောဆယ် တီဂျီ (Thai) တစ်လိုင်းပဲ မြန်မာပြည်ကို ဘွတ်ကင်ဖွင့်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျန်တာတွေ မဆင်းဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
နေ့လည် (၁၅း၅၉)- မန္တလေးတွင်လူတွေ တို့အရေးသံများဖြင့် ဆူညံ။ ၃၃လမ်း၊ ၈၃ နှင့် ၈၄ ကြား။
ညနေ(၁၆း၀၅)- : ခိုင်လုံသောသတင်း - မန္တလေး လမ်း (၃၁)လမ်းမှာတော့ ဆနဒပြသံဃာတော်တွေကို ရှစ်ခိုးတောင်းပန်ပြီး ကျောင်းအပြန်ခိုင်းတာပါ၊ ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပပါယ်မသက်ရောက်ပါဘူး၊ သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့ အရာရှိပါလို့ပါတဲ့ မြို့ခံနဲ့အင်တာဗျူးရပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
ညနေ (၁၆း၂၄)- ပန်းဆိုးတမ်းမှာ စစ်တပ်စီးထားပြီ ။ မင်္ဂလာဈေးမှာတော့ လူထုတဖွဲ့ချီတက်တုန်းလို့ ကြားတယ် ။ လမ်းပြတ်တွေ အကုန်ပိတ်.. လမ်းမကြီးတွေကပဲ သွားလို့ရတယ် (ယခုပဲ ပန်းဆိုးတမ်းလမ်းပေါ်ရှိ အသိပြောပြချက်)
ညနေ (၁၆း၃၀)- မန္တလေးသတင်းအဆက်- ၈၄ လမ်းပေါ်မှာဘုန်းကြီးတွေ လူတွေ အပြည့်ရှိ။ ။ သိန်းကျော်လောက်ရှိမယ်။ တပ်ကနောက်ဆုတ်ပေးထား။ အပစ်အခတ်မရှိသေး။
ညနေ (၁၆း၃၁)- ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် အဖွဲ့များ (၂) ဖွဲ့ခွဲ၍ ချီတက်။ ၊ပုဇွန်တောင်ဘက်တစ်ဖွဲ့ဆင်း၊၊ အလုံဘက်တစ်ဖွဲ့ဆင်း၊။ အလုံဘက်ဆင်းသောအဖွဲ့အား စစ်တပ်မှ ၀ိုင်းထား။
ညနေ (၁၆း၃၄)- မုံရွာမှာ ၈၈မျိုးဆက်ထဲက ကိုရန်နောင်စိုးကိုည ၂နာရီမှာဖမ်းသွားတယ်
ညနေ (၁၆း၃၅)- မန္တလေး မှာ စစ်တပ်ချင်း ပြန်ချနေတယ် ကြားတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်တွေ ၀ဲနေတယ် ပြောနေကြပါတယ်။ သတင်းအတည်ပြုချက်ကိုရရန် စုံစမ်းနေဆဲပါ။
ညနေ (၁၆း၃၇)- မန္တလေးမှာ ၇ိုက်နှိပ်ပြီးတော့ လမ်းဘေးမှားကြည့်နေတဲ့ သူတွေကို ဖမ်းခေါ်သွားတယ်လိုလို့သိရတယ်
ညနေ (၁၆း၄၂)- ပန်းဆိုးတန်းလမ်းပေါ်မှာသွေးတွေအိုင်လို့လို မျက်မြင်တဦးကပြောတယ် သံဒုတ်တွေနဲ့လိုက်တာလို့သိရတယ်
ညနေ (၁၆း၄၇)- ပြည်သူများခင်ဗျား - အခု နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့ICRC (internation redcross) က ကားတွေနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ကူညီနေပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ဒီကားတွေပေါ်တင်ပေးကြပါ။ နီးစပ်ရာ အမြန်အကြောင်းကြားပေးပါ။
ညနေ (၁၆း၅၀)- ဂျာနယ်တွေတချို့လဲ ပိတ်ထားတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ခိုင်လုံပါတယ်၊ဂျာနယ်အသိုင်းအ၀ိုင်းကပြောတာပါ
ညနေ (၁၇း၀၅)- နိုင်ငံခြားသူအဖွားကြီးတဦး သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောကြားပါတယ်။
ညနေ (၁၇း၃၇)- ဒီ အီးမေးရရင် မဖွင့်ကြပါနဲ့ ။ ဗိုင်းရပ်စ်ထဲ့ထားပြီးတာပါ။ တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားက မြန်မာပြည်အရေးထောက်ခံတယ်ဆိုပြီး ဖိုင် attached ပါပါတဲ့ အီးမေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ချင်ရင် - http://www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2007/09/burma.html?_log_from=rss
ညနေ (၁၇း၃၈)- ကျောက်မြောင်းသီတာလမ်းထိပ်မှာပစ်နေတုံးပါတဲ့။ သစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးတဲ့သူတွေလိုက်ဖမ်းနေတုံးပါလို့သိရပါတယ်။
ညနေ (၁၈း၁၀)- ညောင်ဦးတွင် ကြံဖွတ်များက ဦးဆောင်ပြီး တအိမ်တယောက်မထွက် မနေရအမိန့်ဖြင့် ထွက်ခိုင်းပြီး၊ လူထုဆန္ဒပြမှုများကို ဆန်ကျင့်ကြောင်းလုပ်ခိုင်း။ အတင်းခေါ်ထုတ်နေ။ ယခုစတင်ထွက်နေကြောင်းသိရ။ နအဖရဲ့ တန်ပြန်လှုပ်ရှားမှု လုပ်နေပါတယ်။ ကြည့်ရတာ မနက်ဖြန် ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်လာမှာကို ဒီလိုဆန္ဒပြမှုအတုတွေ ပြပြီး လှည့်စားဖို့ စီစဉ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် နီးစပ်ရာပြည်သူတွေကို အမှန်အကန်လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ကြံ့ ဖွတ်က အတင်းအဓမ္မထွက်ခိုင်းလို့ ထွက်ရတဲ့ အတုအယောင်ဆန္ဒပြမှုတွေ သေသေချာချာကွဲပြားခြားနာဖို့ လိုပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကို ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုအစစ်အမှန်ကို သေချာစွာ ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာကို အမြန်အကြောင်းကြားပေးပါ။
ညနေ (၁၈း၂၂)- တောင်ဥက္ကလာ ရဲစခန်း ကိုမီးရှို့ကြောင်းသတင်းကြားရ
ည (၁၉း၀၂)- ကျေက်ပန်းတောင်းမှာလည်း ကြံဖွတ်တွေက လူတွေခေါ်လာပြီး၊၊ ညောင်ဦးမှာလို အခုလိုနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာဆန္ဒပြမှုများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းအင်အားပြ၊ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းဖုန်းအစစ်အမှန်များနှင့် ပြည်သူများ ကလည်း အင်အားပိုများစွာ စီတန်းလှည့်လည်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ည (၁၉း၁၁)- မေမြို့က DSA မှာ ဗိုလ်လောင်းတွေက မန္တလေးကို ဆင်းမလို့ လုပ်နေကြပြီလို့ ကြားရပါတယ်။ သူတို့မှာ လက်နက်တော့ မရှိကြဘူး။ ပြည်သူတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ ခံစားနေရတာ ကိုမကြားရက်လို့ ။ ပြည်သူဘက်ကနေ ကူညီမလို့ ပြောသံကြားရပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားလို့ မနက်ဖန် မှာ သူတို့ကျောင်းအုပ်ကြီး က DSA ကျောင်းသားအားလုံးကို အစည်းအဝေးခေါ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ည (၁၉း၂၈)- တေဇနဲ့သန်းရွှေသမီး ဒီမှာ ရောက်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်။ Dubai Burj Al Arab Hotel Rom No 709 သူတို့ နဲ့ အတူ သက်တော်စောင့် ဗိုလိချုပ်စန်းအောင် ပါပါတယ်။ အခန်းကို booked လုပ်တာ တေဇနာမည်နဲ့ ပါလို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ UAE ကလာတဲ့ သတင်းပါ။
ည (၁၉း၃၄)- : ဒီည စင်္ကာပူအချိန် ၉နာရီခွဲမှာ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အသေးစိတ်သတင်းကို Channel news Asia ကနေလွှင့်လိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီထဲကသတင်းတစ်ခုမှာ အာဆီယံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်က မြန်မာပြည်ကို အာဆီယံ ကနေထုတ်ဖို့အထိ အရေးယူဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ည (၂၁း၀၁)- ဦးဝိစာရလမ်းနဲ့ ဗားကရာ ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ ဗားဂရာကျောင်းနဲ့ အောင်မင်္ဂလာကျောင်းတွေကို အခု ၀င်စီးဖို့ လာနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သတိပေးကြပါ သတင်းဖြန့်ကြပါ နီးစပ်ရာဟော့လိုင်းဖုန်းနံပါတ် ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ ။ ဗိုလ်မိုးလမ်း၊ ဓမာရုံလမ်း၊ မြေနုလမ်းက လူတွေက တိုက်တွေအောက် ဆင်းပြီးစောင့်နေကြပါတယ်။
ည (၂၁း၂၈)- ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုဝင်နေတယ်လာကြည့်တဲ့ လူတွေကိုပစ်တယ် ရန်ကုန်ကကျောင်းတိုင်းလိုလိုကို ၀င်တာ
ည (၂၂း၂၄)- ဆန္ဒပြပွဲတိုင်း ဓာတ်ပံရိုက်တဲ့ ရဲသတင်းပေးတယောက်နာမည်ရထားပါတယ် တင်မောင်လတ်(အင်းစိန်)၊စစ်သားတွေက်ု ကာဗာယူပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူပါ၊
ည(၂၃း၄၂)- သံဃာနာယကတွေကို လုပ်ကြံမယ် .. ပြီးတော့ ဆန္ဒပြသံဃာတွေက လုပ်သလို လုပ်ကြမယ်လို့ အတွင်းသတင်းတခု ထွက်နေပါတယ် ။